Vaovao - Fampiharana malalaka amin'ny Tower Cooling
Fampiharana malalaka an'ny Tower Cooling
Ny tilikambo fihenan-tsakafo dia ampiasaina indrindra amin'ny fanamafisana, ny rivotra, ary ny rivotra (HVAC) ary ny tanjon'ny indostria. Izy io dia manome fiasa miasa amin'ny fomba mahomby sy mahomby amin'ny angovo. Maherin'ny 1500 ny fotodrafitrasa indostrialy mampiasa rano be dia be mba hampangatsiaka ny zavamaniry. Ny rafitra HVAC dia ampiasaina matetika amin'ny tranobe birao, sekoly ary hopitaly. Ny tilikambo fanamafisana indostrialy dia lehibe kokoa noho ny rafitry ny HVAC ary ampiasaina hanalana ny hafanana voarohirohy amin'ireo rafi-pitetezana rano miangona izay ampiasaina amin'ny toby famokarana herinaratra, fanadiovan-tsolika, zavamaniry petrochemical, zavamaniry fanodinana gazy voajanahary, zavamaniry fanodinana sakafo ary fotodrafitrasa hafa.
Ny fizotran'ny indostria sy ny masinina dia miteraka hafanana be loatra ka ilaina ny fanaparitahana tsy an-kijanona ho an'ny asa mahomby. Ny hafanana dia tsy maintsy ho an'ny tontolo iainana. Izany dia amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fifanakalozana hafanana izay fototry ny teknolojia fanamafisana ny tilikambo.
Mahaliana fa na eo aza ny tilikambo mangatsiaka dia fitaovana an'ny 20faha taonjato, voafetra ihany ny fahalalana momba azy ireo. Ny olona sasany mino fa ny tilikambo mangatsiaka dia loharanon'ny fahalotoana, nefa ny hany entin'izy ireo mamoaka ny rivotra dia etona rano.
Taorian'ny taona maro nampivoarana an'ity teknolojia ity dia misy tilikambo mangatsiaka amin'ny karazany sy habe samihafa. Ny tsirairay amin'ireny dia azo ampiharina amin'ny fametrahana enta-mavesatra iray, ny antony maha-zava-dehibe ny famaritana ireo safidy misy. Mariho fa na eo aza ny endriny samihafa, ny fiasa fototra dia mijanona ho toy ny fanaparitahana ny hafanana avy amin'ny rafitra fananganana na ny fizotra mankany amin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny etona. Ireto misy sokajy sasany:
A.Tilikambo hihena mangatsiaka mekanika
B.Tilikambo mangatsiaka amin'ny atmosfera
C.Tilikambo fihenam-bidy hybrid
D.Tilikambo mangatsiaka mampiavaka ny fikorianan'ny rivotra
E.Tilikambo mangatsiaka mampiavaka ny fanamboarana
F.Taratasy mampiavaka ny tilikambo mangatsiaka
G.Tilikambo mangatsiaka miorina amin'ny fomba famindrana hafanana
Ny tsirairay amin'izy ireo dia afaka nitondra tilikambo mangatsiaka maromaro. Ohatra, ny fanasokajiana ireo tilikambo fihenam-bidy amin'ny lafiny fomba famindrana hafanana dia manome safidy telo: tilikambo fihenan-kery maina, tilikambo fihenan'ny circuit mihidy ary tilikambo fihenan-tsakafo mihidy / tilikambo fihenan-tsakafo
Ny tilikambo fihenan-tsasatra angamba mazàna mandany vola amin'ny indostrian'ny indostria raha oharina amin'ny safidy hafa, saingy ny fanamby amin'ny fahombiazana dia mety hampilamina. Zava-dehibe ny fanaraha-maso ny singa mahomby satria miantoka ireto manaraka ireto:
►Mihena ny fanjifana rano
►Ny fiainana serivisy fanitarana
►Mihena ny vidin'ny asa
Mba hitazomana tsara ny tilikambo fihenan-tsakafo, zavatra telo no zava-dehibe: fantaro ny karazana tilikambo fihenam-bidy ampiasainao, ampiasao tsara ny simika ary araho ny fahaverezan'ny rano ao anaty rafitra.
Ny rafitra tilikambo fihenan-tsasatra dia mahazatra amin'ny indostria maro, ny lohany amin'izy ireo dia ny fahefana, ny varotra, ny HVAC ary ny indostria. Ao amin'ny fananganana indostrialy, ny rafitra dia mandà ny hafanana avy amin'ny masinina, ireo fitaovana fanodinana hafanana miaraka amin'ireo loharano hafa. Manokana, ny tilikambo fihenan-tsakafo indostrialy dia mahazatra amin'ny zavamaniry fanodinana sakafo, fanodinana solika, zavamaniry entona voajanahary ary zavamaniry petrochemical.
Fampiharana indostrialy hafa:
►Rano nampitony compresseur rivotra
►Plastika tsindrona & mitsoka bobongolo milina
►Milina fanariana maty
►Fambolena frizidera sy mangatsiaka
►Anodizing dingana zavamaniry
►Orinasa famokarana herinaratra elektrika
►Ny rafitra fanamafisam-peo sy ny milina VAM dia nampangatsiaka ny rano
Ny fisafidianana vahaolana mangatsiaka dia karazana fandinihana ankapobeny ny vidiny, ny habaka, ny tabataba, ny faktiora angovo ary ny fisian'ny rano. Raha tsy azonao antoka ny modely ilainao, azafady mifandraisa aminay mba hahazoana toro-lalana bebe kokoa.